Otu mmelite UI 3.1 maka Galaxy S20 FE laghachiri | Gam akporosis
Fewbọchị ole na ole gara aga, Samsung wepụtara mmelite ahụ Otu UI 3.1 maka ama ama S20 FE, ma ihe omimi ụlọ ọrụ South Korea kwụsịrị ya, na-ahapụ ọtụtụ ndị ọrụ na-enweghị ya ndị na-enweghị ike ibudata ya na mbụ.
Ọnọdụ elu-elu bụ nke izizi nabatara gị, ọbụlagodi tupu mobiles nke Galaxy Note 20. Ugbu a ụlọ ọrụ ahụ ewepụtakwala otu UI 3.1 OTA maka ọnụ ya, yabụ ị kwesịrị ịnwe ọkwa ahụ na-egosi mbata ya, ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ ekwentị a.
1 Galaxy S20 FE na-anabatakwa otu UI 3.1 melite site na OTA
1.1 Atụmatụ nke Galaxy S20 FE
Galaxy S20 FE na-anabatakwa otu UI 3.1 melite site na OTA
Enweghị ọkwa nkwupụta sitere na Samsung na-ekwupụta ihe kpatara mmelite ahụ kwụsịrị. Ekwenyere na ọ bụ ihe na-ezighi ezi, mana ọ nweghị akụkọ na-ekpughe na-egosi nke a. Ọbụna echere na nke a wepụtara n'oge na mberede na ọ gaghị adị ọzọ na ekwentị ruo ọtụtụ izu.
Ozi ọma ahụ bụ na One UI 3.1 maka Galaxy S20 FE ka ewepụtara ọzọ. Mmelite ahụ, dịka akọwara na ọnụ ụzọ GSMArena, chọrọ nbudata nke ihe karịrị 1.7 GB ma nwee otu nọmba ụdị dịka ọ dị na mbụ: 'G781BXXU2CUB5'. Nke a na-eme ka anyị chee na mmelite ahụ akwụsịghị n'ihi ọdịda ma ọ bụ nsogbu.
OTA na-agbasa ugbu a n'ọtụtụ mba na Europe; amaghi ya ma odikwa na uwa nile. Ọ bụrụ na ịnabataghị ya na ngwaọrụ gị ma, ịnwere ike iji aka ya nyochaa ya site na ịgagharị na menu Nhazi > Mmelite ngwanrọ site na ekwentị gị.
Atụmatụ nke Galaxy S20 FE
Nyochaa njirimara na nkọwapụta nke Samsung Galaxy S20 FE, anyị na-ahụ na arụmọrụ a dị elu, nke amalitere na Ọktoba afọ gara aga, nwere ihuenyo teknụzụ Super AMOLED na sentimita 6.5 nke diagonal. Mkpebi panel ahụ bụ FullHD + na 2.400 x 1.080 pikselụ, nke na-eme ka akụkụ ahụ dị 20: 9. N'aka nke ya, enyere pixel pixel dị ka 407 dpi.
N'aka nke ọzọ, maka okwu arụmọrụ, Qualcomm's Snapdragon 865 mobile platform bụ ihe na-enye gị ike ụbọchị ahụ. Nke a bụ isi asatọ, 7 nm ma nwee elekere elekere kachasị nke 2.84 GHz. Na nke a, anyị ga-agbakwunye 6/8 GB Ram na ebe nchekwa dị n'ime nke 128/256 GB. Enwekwara batrị ikike 4.500 mAh nke na-egosipụta teknụzụ na-ebu ngwa ngwa 25W ngwa ngwa ma na-akwụ ụgwọ site na ọdụ ụgbọ USB Type-C 3.2.
Igwefoto igwefoto nke Galaxy S20 FE dị okpukpu atọ ma mejupụtara onye na - agba egbe 12 MP nwere oghere f / 1.8; ihe mmetụta a na-abịakwa na PDAF na OIS. Na mgbakwunye, ihe mmetụta abụọ ndị ọzọ bụ otu n'ime 8 MP maka telephoto na onye ọzọ nke 12 MP maka foto sara mbara-obosara na mpaghara 123 Celsius. Ihe niile a na-esonyere ya na eriri ọkụ abụọ dị na ụlọ modul.
Igwefoto Galaxy S20 FE na-apụta maka ịbụ otu n'ime ndị kachasị wee zie ezie [Nyocha]
Ihe mmetụta nke onwe bụ 32 MP ma nwee oghere f / 2.2. Nke a na-abịa na ndekọ atụmatụ dị ka 4K na 30/60 fps na 1080p na 30/60 fps. O nwekwara njiri mara mma ihu na ihe ndị ọzọ.
Ihe ndi ozo di iche-iche nke elu-elu nke smartphone gunyere IP68 grade water resistance, Wi-Fi 6, GPS nwere A-GPS, GLONASS, BDS na Galileo, Bluetooth 5.0, tinyere onye na - agu akara mkpisiaka n’okpuru ngosi.
Enwere ike ịchọta ekwentị maka ire ere n'ụwa niile. Na Europe, ngwaọrụ ahụ nwere ọnụahịa ọnụahịa nke euro 550; Ọ bụ otu n'ime njedebe kachasị dị ọnụ ala ịchọta taa na Snapdragon 865 n'okpuru mkpuchi. On Amazon ọ nwere ọnụahịa ahụ ma nye ya ndị dị iche iche na-ere ahịa; Nwere ike ịchọta onyinye maka euro 50 dịkarịa ala na saịtị ndị ọzọ na nyiwe ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Otu mmelite UI 3.1 maka Galaxy S20 FE laghachiri
Otu esi eji smartphone gị dị ka onye njikwa na Nintendo Switch